‘चुनावी सुरक्षा उच्च छ, तर विप्लवबाट बढि खतरा देखेका छौँ’ | newdnn.com
३०,शनिबार ०५:४० Sangita Rai
३० बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले चुनावका लागि नेपाली सेनासहितको विशेष दस्ता नै परिचालन गरेको छ । नेपाली सेनाले दुई हप्ताअघिबाट गस्ती समेत शुरु गरिसकेको छ । तर सार्वजनिक रुपमै चुनाव बहिष्कार गरेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट माओवादीबाट बढि खतरा रहेको गृहमन्त्रालयले बताएको छ । झण्डै ६५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको सरकारले विप्लवलाई खतराको पहिलो नम्बरमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ । चुनावको सुरक्षाका बारेमा गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीसंग गरिएको विशेष अन्तर्वार्ता :
 चुनावी सुरक्षा कस्तो छ ?
स्थानीय तहको चुनावका लागि सबै व्यवस्था सकिएको छ । देशका सबै मतदान केन्द्रमा सबै तयारी गरेर अब मतदानका लागि विशेष अवस्थामा छ । अहिलेसम्म कुनै ठाउँ पनि सुरक्षाको कमी छैन । सबै तयारी पुरा भइसकेको छ ।
 कति सुरक्षाकर्मी परिचालन हुदैछन ?
सबै गरेर झण्डै ६५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी सबै लगाएर ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित छन । चुनावकै लागि भनेर विशेष टोली पनि परिचालन गरिएको छ ।
 चुनावका लागि सुरक्षा संरचना कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ ?
हामीले चारओटा घेरामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौँ । पहिलो घेरामा म्यादी र प्रहरी हुनुहुन्छ । दोश्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेश्रो घेरामा नेपाली सेना रहनेछन । मतदान केन्द्रको संवेदनशिल क्षेत्रमा विशेष सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन हुनेछन । तर उनीहरु सादा पोशाकमा खटिनेछन ।
 चुनावमा सबैभन्दा ठुलो चुनौति केलाइ मान्नु भएको छ ?
अहिलेसम्म त्यस्तो ठुलो चुनौति त हाम्रा लागि केही छैन । तर सार्वजनिक रुपमै विप्लव नेतृत्वको माओवादीले चुनाव बहिष्कार गरेर निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने घोषणा गरेकाले त्यसलाई मुख्य चुनौति मानेका छौँ । अरुभन्दा पनि बढी खतरा चुनावमा उनीहरुबाट हुन सक्छ भनेर हामीले बाक्लो रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौँ । त्यसैले मतदाताले आत्तिनु पर्दैन ।
 अरु तयारी के के गर्नु भएको छ ?
मुख्यतया सुरक्षाकै विषय हो । सुरक्षाकर्मी बाहेक झडप हुने सम्ंभावित ठाउँका लागि हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । अहिलेसम्म सबै मतदान केन्द्र उच्च सुरक्षाको घेरामा छन । झडप, घटना र आक्रमण भएको ठाउँमा १० मिनेटभित्रै उच्च सुरक्षा टोली पुग्ने गरी तयारी गरेका छौँ ।
फोटो : गृह मन्त्रालय